Tag: Qandala | Sagal Radio Services
Diyaarado duqeyn ka geystey deegaan ka tirsan Puntland
Sagal Radio Services • News Report • April 9, 2018
Duqeyn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la sheegay in xalay saqdii dhexe lagu qaaday fariisimo ay ku leeyihiin ururka Daacish meel ku dhow degmada Qandala ee maamul goboleedka Puntland.
Sawirro: Qabsashadii Qandala iyo xaalada deegaanka oo aad looga deyriyay
Ciidamada Puntland oo taageero ka helaya maraakiib Ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha ayaa shalay ku guuleystay inay ka saaraan Qandala dagaalyahano ka tirsan Daacish oo muddo bil iyo maalmo ku sugnaa deegaankaas.
Ciidamada Puntland oo weerar dhinaca Badda ku qaaday degmada Qandala
Sagal Radio Services • News Report • November 10, 2016
Ciidamadda Badda ee Puntland iyo dagaalyahanada Daacish ee gacanta ku haya degmada Qandala ayaa is weydaarsaday rasaas culus, iyadoo Puntland isu diyaarineyso weerar rogaal celis ah oo ay ku qaado deegaankaas, si ay uga saarto dagaalyahanada Daacish.
Barakac baahsan oo wali kasocda Qandala
Qabsashada Qandala ay dhawaan qabsadeen ciidamo Daacish taabacsan balse Soomaali u badan ayaa sababtay in dad badan ay magaaladaa ka barakacaan.
Dagaalyahanadii Daacish ee shalay qabsaday Qandala oo xalay isaga baxay
Sagal Radio Services • News Report • October 27, 2016
Dagaalyahanadii ka tirsanaa Daacish ee shalay qabsaday degmada Qandala ee Gobolka Bari ayaa xalay isaga baxay, iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay ku wajahan yihiin degmadaas.